MPISOLOVAVA ONLINE CHAT FREE
Dia zavatra sy ny fomba afaka ny sasany mpahay lalàna ao an-trano ny tranga-na raha toa ny hoe mora kokoa — ny fomba ve Ianao manokana dia zava-dehibe ny torohevitry ny Renivohitra ao amin’ny sehatry ny lalàna sivily.
Isika dia tsy handeha lavitra ho ohatra — Dia (sanatria) feno trano, Dia mazava ho azy dia tapa-kevitra, vinavina ny haben’ny fahavoazana nahatratra Euro, Eny, ary momba ny fitondran-tena ratsy Ianao koa dia nandre, ary noho izany dia mino fa euro onitra noho ny fahavoazana ara-pitondrantena ireo koa dia mazava fa tsy teny ho Anao.
Ny mpiasa manam-pahaizana manokana ny fikambanana, ny zava-misy ao ny tondra-drano dia voamarina eo anatrehan ny namantsika, ary nanoro hevitra ny farany mba hamaha ny olana amin’ny Tsy am-pilaminana
Sy ny mpiara-belona dia karazana toy ny mampihaino azy hiaiky ny helony ary ankoatra izany dia nangataka mba tsy hitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana.Toa ny zava-drehetra ho tsara, — fa mba omeo an-tsitrapo niteraka fahavoazana ho an’ny mpiara-belona dia tsy maika. Manapa-kevitra ny hametraka fitoriana any amin’ny fitsarana sy ny fanafainganana ny handiso fanantenana Anao — efa amin’ny dingana ity izay mety ho olana lehibe amin’ny mahay fandrafetana ny filazana sy ny fanamarinana ara-dalàna, fa na dia ny fitsarana ny asa rehetra nandray tsara — tena mety ny vokatry ny raharaha dia ho ratsy.
Inona avy ny maha ratsy ny mangataka.Lalàna hentitra ny fanomezana ara-dalàna ny asa ao an-Drenivohitra efa imbetsaka maintsy hiatrika fitsarana toe-javatra izay noho ny antony tsy fahampian’ny fanangonana ny porofo, ny mpitory very karazana toy ny fandresena ny fizahan-toetra. Eny, misy antony hafa ankoatra ireo — fa efa ho tanteraka amin’ny tsy araka ny tokony ho porofo ary tsy miraharaha ny asa ny mpahay lalàna ao an-Drenivohitra.Ary noho izany dia tena azo ampiharina ny torohevitra — raha toa ka an-tsitrapo no miombon-kevitra ny ho mpanitsakitsaka ny zon’olombelona ao amin’ny lalàn’ny fanjakana dia tsy azo atao — karazany izany ao amin’ny andian-teny hoe»mpisolovava Renivohitra»na»Capital mpisolovava»na»mpisolovava ao an-trano ny tranga-Drenivohitra», hahita ny antsipirihany momba ny orinasa sy ny misoratra anarana maimaim-poana ho an’ny fakan-kevitra ara-dalàna.
Ara-dalàna ny orinasa satria ny fananganana dia manome ara-dalàna ny asa ao an-Drenivohitra eo amin’ny sehatry ny lalàna sivily sy manana traikefa nandritra ny taona maro mampifanditra ao amin’ity sampana lalàna, fa maro be nanorim-ponenana tany amin’ny fitarainana fomba an-trano ny fifandirana.
Izany ihany koa dia tokony homarihina fa ny mampiaraka ny ara-dalàna ny asa ny mpahay lalàna ao an-trano ny tranga ao amin’ny Renivohitra — ny dia fahita ara-pitsarana manao ny orinasa.
Ka te-hampiasa ara-dalàna ny asa ao an-Drenivohitra ny orinasa Ianao dia hahazo ny matihanina ny asa ny mpahay lalàna ao an-Drenivohitra, avo lenta ara-dalàna ny asa Renivohitra matihanina eo amin’ny sehatry ny lalàna sivily, izay nandritra ny taona maro nanao fanazaran-tena eo amin’ity faritra ity
Counterclaim - Famaritana, Ohatra, Toe-Javatra, Ny Fomba Fiasa